'पानी जहाज' लाई प्रधानमन्त्री ओलीको वधाई - Ek Jamarko
Home / मनोरन्जन / 'पानी जहाज' लाई प्रधानमन्त्री ओलीको वधाई
'पानी जहाज' लाई प्रधानमन्त्री ओलीको वधाई
~ नेपालमा पानी जहाज चल्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले नेपालमा आवस्यक सामाग्री विदेशबाट आयात गर्न पानीजहाज चलाउँने भनी घोषणा गरिरहेको बेला चर्चित सर्जक एवं लोक गायक बैकुण्ठ महत र संचारकर्मी एवं भिजे गायीका शितल शर्माले भने गित मार्फत नेपालमा पानी जहाज चलाउँने कथा बुन्दै "पानीजहाज” नामक नयाँ गित सार्बजनिक गरेका छन् । गीतमा पानी जहाजको मात्र चर्चा छैन । अहिलेको सरकारले गरेका लोकप्रिय घोषणा हरु सबै समेटीएका छन ।
~ 'पानीजहाज' गीत बरदान डिजीटल प्रा. ली. को नयाँ युट्युव च्यानल बाट अपलोड भएकै दिन २५ हजार भ्यु पुग्यो । नया च्यानल बाट सुरुको दिनमै २५ हजार भ्यु पुग्नु चानचुने कुरा थिएन । यसरी युट्युव भ्यु को रेकर्ड राखेको गीत सुनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले बधाई समेत दिनुभएको कुरा सामाजीक संजालमा गायक बैकुण्ठ महत ले सार्वजानीक गरेका छन । साधारणतया ठुला च्यानलमा अपलोड गरिएका गीत भन्दा आफ्नो नयाँ च्यानल मार्फत डिजीटल बजारमा पठाईएको आफ्नो गीत हरुको भ्यु अस्वाभाविक रुपमा बढेपछी सोधीएको एक प्रश्नमा महत भन्छन सायद विषयवस्तु र गुणस्तरको कारण आफ्नो गीतले युट्युव मा यसरी दर्शक पाएको हो । गीतमा समेटीएको विषयवस्तु यथार्थपरक र मनोरन्जनात्मक दुवै भएको ले दर्शक श्रोता ले मन पराईदिनुभएको हो ।
~सरकारले नेपालमा पानी जहाज, हावा बाट बिजुली, केवलकार,तेल खानीको सम्भावना र रेल जस्ता महत्वपुर्ण योजनाहरु सुनाइ रहेका बेला गायक महले पनी आफनो गितमा उक्त विषय बस्तुलाई गित मार्फत बजारमा ल्याएका हुन । नेपालमा पनि पानी जहाज, हावा बाट बिजुली, केवलकार,तेल खानीको सम्भावना, रेल लगायतका योजनाहरु सम्भव रहेको प्रति सकरात्मक सन्देस प्रबाह गर्न उक्त गितले निकै महत्व राख्ने गायक महतको भनाई छ । आइतवार वुटवलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि उक्त गितलाई सर्वजनिक गरिएको थियो।
~नेपाल पनि गरे धेरै योजनाहरु पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देस दिन यो गितले निकै महत्व राख्ने उनको भनाई छ । बर्तमान सरकारले गरिरहेका महत्वपूर्ण योजनाहरु नेपालमा पनि सम्भावना रहेको प्रति यो गितको मुख्य भाव रहेको गायक महतले बताए ।
~सरकारले गर्न खोजेका महत्व पूर्ण कामलाई गित मार्फत सबै श्रोता माझ ल्याएको महतले बताए । हाम्रो देशमा विद्यमान परनिर्भरता कम गर्न बर्तमान सरकारले गरिरहेका योजनाहरु काम गरे पुरा हुन सक्ने प्रति गीतले सन्देश दिन खोजेको कुरा गायक महतले बताए ।
~अहिलेको परिवेशमा सर्वसाधारण जनताले सरकार प्रति गरेको आशालाई आफ्नो गीतमा समेट्न पाउदा आफु निकै उत्साहित भएको कुरा उक्त गीतकी गायिका शितल शर्माले बताइन । साथै सर्जक बैकुन्ठ महत संगको सहकार्यमा आफु निकै आशावादी रहेको भन्दै उद्घोषीका शितल ले यस्तो कालजयी गीतको निर्माण र गायनमा सहभागी हुन पाउनु आफ्नो लागी गौरवको विषय भएको बताईन ।
~साथै सरकारले गरेका बोलेका कुरालाई रेकर्डमा सुरक्षीत गरी दस्ताबेजको रुपमा राखेर सर्मथन र खबदारी गर्न उक्त गीत तयार पारिएको कुरा सर्जक एवं गायक महत बताउछन । बैकुण्ठ महतकै लय तथा शब्द संकलन रहेको गित गायक महत र गायिका शितल शर्माको स्वरमा रहेको छ । 'पानी जहाज' गीत लाई वरदान डिजिटल प्रालिले बजार ब्यवस्थापन गरेको छ ।
यो लिंकमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस भिडियो
'पानी जहाज' लाई प्रधानमन्त्री ओलीको वधाई Reviewed by Jamarko TV on जुलाई 04, 2016 Rating: 5